हालैका वर्षहरूमा मा, farmlands झन् टिलर्स र cultivators प्रयोग गर्न थाले छन्। समानता भएको आफ्नो कार्य यी मिसिन अलिकति प्रत्येक अन्य फरक। टिलर सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया बिरुवाहरु समयमा तयार सतहहरु को खेती को लागि अनुकूल छ जो एक प्रविधी हो (loosening, harrowing, ridging र यसको अगाडी।)। Structurally, यो नै अक्ष गठन गरिएको छ। बरु कटर माउन्ट को आन्दोलन कारण भएको ड्राइभ पाङ्ग्रा कृषि काम समयमा, स्थापित गर्दै एक्सल गर्न मोटर बाट शक्ति हस्तान्तरण गर्न बाहिर। , इन्जिन क्रांतियों र काम उपकरण किसान भारी माटो मा काम गर्न अनुमति दिँदैन को पालैपालो संख्या बीच कठोर सम्बन्ध चक्कु को एक कम गति परिक्रमा मा ढिलो हुनेछ।
हिंड्न-पछि ट्रेक्टर वा मिनी-ट्रेक्टर - बहु-कार्यात्मक एकाइ, सुसज्जित पेट्रोल र डिजेल इन्जिन कहिलेकाहीं संग। मोटर शक्ति दायरा 5-15 HP मा फरक हुन सक्छ कम revs, यस्तो उपकरण को लागि एक ठूलो प्लस छ, कुनै शंका, एक डिजेल इन्जिन उच्च टोक संग मोटर-ब्लक मा। प्रयोगको कारण डिजेल इन्जिन को उच्च लागत सीमित छ। टिलर्स प्रकाश, मध्यम र भारी विभाजित छन्। 100 किलो वजन मध्यम र प्रकाश उपकरण संग, तिनीहरूले मुख्यतः व्यक्तिगत खण्डहरू प्रयोग गरिन्छ।
यसको बहुमुखी कारण भारी मोटर ब्लक व्यापक कृषि र नगरपालिका काम पूरा मा प्रयोग गरिन्छ। धेरै बलियो टिलर्स टिलर्स, यो एकाइ अप सय धेरै दसौं गर्न खेत क्षेत्र प्रक्रिया गर्न सक्षम छ। यो hinged र पीछा मशीनरी संग सज्जित गर्न सकिन्छ, कार्यात्मक उद्देश्य उपकरण को बारेमा दुई दर्जन विभिन्न प्रकारका छन्।
भारी टिलर्स कार्य विभिन्न जटिलता नियुक्त कि दिइएको, तिनीहरूले मोबाइल हुन छ, यो अन्त गर्न, तिनीहरूले बहु-सीमा (1,8-12 मी / घन्टा) आन्दोलन प्रदान। तिनीहरूले शक्ति शाफ्ट, काम गर्दा hinged तंत्र र उपकरण जडान जो छ कि महत्त्वपूर्ण छ अतिरिक्त उपकरण गति एकाइहरु परिवर्तन गर्दैन। यो cultivators र मोटर ब्लक भिन्नता ससर्त, उत्तरार्द्ध, माटो बाहेक, एकदम भारी भार, काटन कार्य लग घाँस mowing, क्षेत्र सफाई, स्टम्पहरू uprooting, आदि को परिवहन मा काम गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ हुनत
तपाईं विशेष गरी जहाँ ट्रेक्टर प्रयोग अनुपयुक्त छ ती कार्यहरूमा, सबै वर्ष दौर धेरै संचालन मा भारी टिलर्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकै समयमा यो बाहिर छाडा र नरम माटो मा काम पूरा गर्न गाह्रो छ, जबकि ठूलो motoblock वजन, भारी soils को प्रक्रिया मा एक फाइदा छ। विपरीत दिशा मा पाङ्ग्रा को परिक्रमा र कटर एक वर्दी र अगाडि अर्थपूर्ण आन्दोलन सुनिश्चित गर्दछ।
जोताइ, haying र ट्रेक्टर अपरेटर हिड्ने को एडप्टर (सीट संग स्लेज मोड्युल) प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो को लागि, एक ठूलो क्षेत्र मा लन mowing सम्बन्धित कामहरू, समयमा जो अतिरिक्त उपकरण हुक वा सीधा उहाँलाई रचनाहरू आवश्यक मामला मा।
हालैका वर्षहरूमा भारी टिलर्स (http://in-green.com.ua) सक्रिय चीन देखि आयात गरिएको छ, यो चिनियाँ उत्पादन र यस्तो उपकरण को प्रयोगमा व्यापक अनुभव प्राप्त गरेका छन् भन्ने तथ्यलाई कारण छ। हेराफेरी, चिनियाँ निर्माताहरु, अन्तस्करणले गरिएका बाट आउँदै, र बन्द ध्यान दिनुपर्छ। विश्वसनीयता र विनिर्माण गुणस्तर चिनियाँ टिलर्स आफ्नो उत्पादन बढी स्वीकार्य को मूल्य, हाम्रो र विदेशी मोडेल एक बराबर छन्।
म कच्चा आलु पाल्तु जनावर खान सक्नुहुन्छ?
बुनाई सुई Sledkov: दुई spokes प्रयोग गरेर दुई सरल निर्माण विधि
बेलेभुइ क्लब3* (स्पेन / o.Mayorka) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
Thrush नै पारित गर्न सक्छ?
रूसी साहित्य 18-19 शताब्दीयौंदेखि मा "सानो मान्छे" को विषय: सबैभन्दा ज्वलन्त वर्ण
वालपेपर टास्ने छनौट